Football Khabar » राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यास कि निरन्तरता ? मेस्सीले मुख खोले
राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यास कि निरन्तरता ? मेस्सीले मुख खोले
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा आफ्नो टिम सेमिफाइनलमा ब्राजिलसँग पराजित हुँदै उपाधि होडबाट आउट भएपछि अर्जेन्टिनाका कप्तान लिओनल मेस्सी निराश छन् । कप्तानको हैसियतमा आफ्नो टिमलाई उपाधि जिताउन नसकेका उनको अहिले आलोचना भइरहेको छ । अर्जेन्टिना प्रतियोगिताबाट आउट भएपछि कतिपयले मेस्सीले अब राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिनसक्ने अड्कलबाजीसमेत गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २० असार २०७६, शुक्रबार ०७:०६